Vovoka urolithin tsara indrindra - Orinasa mpanamboatra
Cofftek dia manana ny fahaizan'ny famokarana betsaka sy ny famatsiana urolithin a, urolithin b ary Methylurolithin A eo ambanin'ny toetran'ny cGMP.
Mangataka teny fohy
Mividiana vovoka Urolithin
Vovoka urolithin B
Vovoka Urolithin A
COA ny Urolithin A
COA ny Urolithin B
COA ny 8-O-Methylurolithin A
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny Urolithin A ianao, dia ity no torolalana ilainao; Ataovy azo antoka fa mamaky ireo fanontaniana 24 rehetra ianao.
Andeha isika hanomboka:
> Inona no atao hoe Urolithin?
> Molekiolan'ny Urolithin fantatra
> Urolithin A Fonosana fampahalalana vovoka
> Urolithin B Powder Information Package
> Ahoana ny fiasan'ny Urolithin?
> Tombontsoa azo avy amin'ny Urolithin
> Fatran'ny Urolithin
> Loharanon-tsakafon'ny Urolithin
> Nahoana ianao no tokony hividy amin'ny orinasa mpanamboatra anay?
> Inona ny Urolithin A?
> Inona avy ireo voankazo misy Urolithin A?
> Inona no mahasoa ny Urolithin?
> Inona no sakafo misy Urolithin A?
> Inona no soa azo avy amin'ny Urolithin A?
> Ahoana no ahazoantsika Urolithin A amin'ny sakafontsika?
> Inona no atao hoe Mitopure?
> Azo antoka ve ny Mitopure hohanin'ny olombelona?
> Rahoviana aho no tokony handray Mitopure?
> Inona no atao hoe Urolithin fanampiny?
> Tombontsoa fanampiny Urolithin A
> Inona no atao hoe Urolithin B?
Inona ireo Urolithins?
Ny urolithins dia avy amin'ny derivatives na metabolite an'ny singa ellastika toy ny ellagitannins. Ireo singa simika ireo dia metabolisma avy amn-asidra ellagic avy amin'ny tsinay microbiota.
Ny angon-drakitra voahaja indrindra avy amin'ny National Institutes of Health
Mandehana any amin'ny loharano
Koa satria ny flora-tsinay dia zava-dehibe amin'ny famokarana urolithins, ny habetsaky ny urolithins vokarina ao amin'ny vatana dia miankina amin'ny karazana zavamananaina ao amin'ny flora, ny zavamananaina manan-danja indrindra an'ny Clostridium leptum vondrona. Voalaza fa ny olona manana microbiota manan-karena amin'ny mpikambana ao amin'ity vondrona ity dia mamokatra urolithins betsaka kokoa noho ireo manana flora tsinay hafa toy ny Bacteroides na Prevotella.
Ny urolithins koa dia novokarina avy amin'ny punicalagin ao amin'ny tsinainy, mitovy amin'ny ellagitannins, ary avy eo dia mivoaka amin'ny urine. Mba hijerena ny famokarana urolithin ao amin'ny vatana, ny haavony dia mila zahana amin'ny urine ny olona izay nandany sakafo manankarena amin'ny asidra ellagic na famenony miaraka amin'ny urolithins ho tena mpiorina ao aminy. Ny urolithin, indray mandeha ao amin'ny plasma, dia azo tsikaritra amin'ny endrika glucuronides.
Ny urolithins dia misy voajanahary amin'ny sakafo maro, na dia tsy ny molekiola urolithins rehetra aza dia azo alaina amin'ny sakafo. Raha vao mihinana sakafo manankarena amin'ny asidra ellagika dia miankina amin'ny flora-tsinay izany mba hanapotehana ireo ellagitannins sy punicalagin ho lasa metabolite mpanelanelana sy ireo vokatra farany; molekiola urolithin.
Ireo molekiola ireo dia nanjary nalaza tato ho ato ary manohy miakatra ho toy ny suplemen superfood noho ny tombontsoa manohitra ny fivontosana, ny fahanterana, ny anti-milaza zavatra, ary ny fampidirana autophagy. Ankoatr'izay, ny molekiola urolithin manokana dia mifandray amin'ny fanatsarana ny haavon'ny angovo satria misy fiatraikany lehibe amin'ny fahasalamana mitochondrial. Ny famokarana angovo ao amin'ny vatana dia dingana iray izay mitranga ao amin'ny mitochondria, ary ny fanatsarana ny fiasan'ity organelle ity dia iray amin'ireo asan'ny Urolithins maro.
Molecules fantatry ny Urolithin
Ny urolithins dia miresaka iraisan'ny molekiola isan-karazany ao amin'ny fianakaviana urolithin nefa manana ny firafitry ny simika, ny anaran'ny IUPAC, ny rafitra simika ary ny loharano. Ankoatr'izay, ireo molekiola ireo dia manana fampiasana sy tombony maro samy hafa amin'ny vatan'olombelona ary noho izany dia ambenana amin'ny fomba hafa amin'ny endrika famenony.
Ny urolithin, taorian'ny fikarohana lalina, dia fantatra fa mizara ho molekiola manaraka ao amin'ny vatana, na dia tsy dia fantatra loatra momba ny molekiola tsirairay: ●Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
● Urolithin B (Urolithin 3-Hydroxy)
Urolithin A sy Urolithin B, fantatra amin'ny anarana hoe UroA sy UroB, no metabolita fantatry ny Urolithins ao amin'ny vatana. Ireo roa ireo koa dia molekiola izay ampiasaina amin'ny famenony sy ny vovony fanoloana sakafo.
Raha vao ao anaty rà, Urolithin A dia hita toy ny urolithin A glucuronide, ary Urolithin B dia azo tsapain-tanana ho ururithin B glucuronide. Noho io antony io dia inoana fa manana ny vokany mitovy amin'ireo teo alohany izy ireo ary tsy azo atao amin'ny urolithins ny fandalinana vivo. Ny tsy fahampian'ny fanadihadiana in vivo dia manahirana ny manombana raha toa ka misy fiatraikany tsy mitovy amin'ny UroA sy UroB ny glucuronides UroA sy UroB.
Urolithin A dia manana derivative iray hafa izay azo tsikaritra ao anaty ra, dia ny, Urolithin A sulfate. Ireo derivatives rehetra ireo dia manao ny asany ao anaty ra ary avy eo dia esorina amin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny urine.
Urolithin D dia molekiola manan-danja iray hafa novokarin'ny vokatry ny mikrobiota tsinay, na izany aza, tsy dia fantatra loatra momba ny fiantraikany sy ny fampiasana azy. Amin'izao fotoana izao dia tsy ampiasaina amin'ny fanampin-tsakafo na fanoloana sakafo izy io, fa tsy toy ny namany, UroA sy UroB. Ankoatra izany, tsy fantatra ny loharanon-tsakafon'ny Urolithin D
Kitapo fampahalalana vovoka Urolithin
Ny urolithin A dia tsy misy voajanahary amin'ny loharanon-tsakafo ary an'ny vondrona fitambarana fantatra amin'ny hoe benzo-coumarins na dibenzo-α-pyrones. Izy io dia namboarina tamin'ny alàlan'ny ellagitannins mankany Urolithin A 8-Methyl Ether alohan'ny hamakiana azy hatrany amin'ny Urolithin A. Ity vokatra farany ity dia azo zahana amin'ny orinasa mpanamboatra antsika amin'ny endrika vovo Urolithin A. Ny vovoka MethylUrolithin A dia azo vidiana betsaka koa raha ilaina izany.
Ny urolithin A dia tsy misy amin'ny ambaratonga mitovy, na dia amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny fanjifana ireo teo alohany aza, amin'ny olona samy hafa satria miankina amin'ny asan'ny microbiota tsinay avokoa izy rehetra. Ny metabolisma Urolithin A dia inoana fa mitaky Gordonibacter urolithinfaciens sy Gordonibacter pamelaeae fa ny olona sasany amin'ireny dia mbola mampiseho farafaharatsiny tsy misy fiatraikany amin'ny famokarana molekiola.
Urolithin A dia manana fiasa manokana izay mampiavaka azy amin'ireo singa hafa, toa ireo voalaza etsy ambony latabatra etsy ambany.
3,8-Dihydroxybenzo [C] chromen-6-ny iray
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-one; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) PYRAN-6-ONE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-iray; Pigmenta Castoreum I; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-one, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-one); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-one
Vovoka mavo maivana
Soluble ao amin'ny DMSO (3 mg / mL).
Andro ho an'ny herinandro: ao amin'ny efitrano maizina sy maina amin'ny 0 - 4 degre C Volana ka hatramin'ny taona: Ao amin'ny Freezer, lavitra ny rano amin'ny -20 degre C.
Ampiasaina amin'ny sakafo ho fanoloana sakafo sy famenon-tsakafo
Kitapo fampahalalana vovoka Urolithin B
Ny urolithin B dia fitambarana phenolika izay vao nanomboka novokarina betsaka nanomboka ny volana janoary 2021. Izy io dia azo alaina amin'ny fihinanana sakafo maromaro izay loharano voajanahary amin'ny ellagitannins izay azo alaina ao anaty Urolithin B. Hita fa mahery io fitambarana anti-antitra izay azonao vidiana betsaka amin'ny endrika vovoka Urolithin B.
Ny fananana samihafa amin'ny vovoka Urolithin B misy amin'ny orinasan-tsika dia voalaza etsy ambany:
3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, D] pyran-6-ny iray
AURORA 226; Urolithin B; AKOS BBS-00008028; Urolithin 3-hydroxy; 3-hydroxy-6-benzo [c] chromenone; 3-hydroxybenzo [c] chromen-6-one; 3-Hydroxy-benzo [c] chromen-6-iray; 3-HYDROXY-6H-DIBENZO [B, D] PYRAN-6-ONE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-one, 3-hydroxy-; 3-Hydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one AldrichCPR
Taratra volontsôkôlà maivana
Azo levona amin'ny 5mg / mL rehefa mafana, ranoka madio
Anti-oxidant sy Pro-oxidant fanampiny miaraka amin'ny hetsika estrogenic.
Ankoatr'ireo molekiola Urolithins lehibe izay noforonina vokatry ny fihetsiky ny flora dia misy molekiola maromaro izay mpanelanelana miforona mandritra ny fahavakisan'ireo teo alohany. Ireto mpanelanelana ireto dia misy:
● Urolithin C (urolithin 3,8,9-Trihydroxy)
Tsy dia fantatra loatra ny momba ireo mpanelanelana ireo amin'izao fotoana izao, kanefa, ny fikarohana bebe kokoa dia mety hahita ny tombony sy ny fampiasana ireo molekiola Urolithin ireo.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Urolithins?
Ny urolithins, toy ireo fitambarana hafa ampiasaina amin'ny famenon-tsakafo, dia misy fiantraikany amin'ny taova sy rafitra samihafa ao amin'ny vatana, mba hamokarana ireo vokany mahasoa. Ny fomba fiasan'ny Urolithins, na A na B, dia azo zaraina ho sampana lehibe enina, ary ny sampana tsirairay dia manana ny fahafaha-mamokatra tombontsoa marobe.
● fananana antioxidant
Ny tombony lehibe amin'ny fananana fananana antioksida dia ny fihenan'ny fihenan'ny okididida amin'ny vatana. Ny adin-tsakafo oksidatif dia manondro ny fihenjanana amin'ny sela sy sela ao amin'ny vatana vokatry ny fiasan'ny simika izay mamokatra fitambarana tsy mitombina, fantatra koa amin'ny hoe radika malalaka. Ireo radikaly maimaim-poana ireo dia mety mbola handray anjara amin'ny fihetsiketsehana simika miovaova ao amin'ny vatana, ireo vokatra azo avy amin'izany izay manimba ny sela sy ny sela.
Ny urolithins dia manafoana io adin-tsaina io, izay miteraka fihenan'ny ratra amin'ny sela ary mampitombo ny fahafaha-miaina ny sela. Ireo vokatra ireo dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fihenan'ny famokarana intracellular Reactive Oxygen Species (iROS), izay karazana radikaly afaka. Ankoatr'izay, ny fananana antioxidant an'ny Urolithin A sy Urolithin B dia mipoitra ihany koa amin'ny alàlan'ny fihenan'ny subunit NADPH oxidase subunit, izay tena ilaina amin'ny fiatrehana simika vokatry ny adin-tsaina oxidative.
Mba hamokarana ireo fananana antioxidant, Urolithins koa dia mampitombo ny fanehoana ny antioksidan heme oxygenase-1 amin'ny alàlan'ny làlan'ny famantarana Nrf2 / ARE. Izany dia manampy azy ireo tsy hampihena ny fitambaran-javatra mampidi-doza fotsiny fa koa hampitombo ny anzima tsara izay mampiroborobo ny fananana antioksida.
Ny urolithins, raha omena ny totozy miaraka amin'ny fahasimban'ny ati-doha ateraky ny LPS, dia nanakana ny fampidirana microglial, na amin'ny teny tsotra kokoa, ny fanaintainan'ny ratra sy ny fivontosana izay mety hampitombo ny fahasimban'ny ati-doha maharitra. Ity vokatry ny urolithins ity dia inoana fa fifangaroan'ny fananana antioksida sy toetra manohitra ny inflammatoire.
● Toetra fanoherana ny inflammatoire
Ny fananana manohitra ny inflammatoire an'ny Urolithins dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny lazany eo amin'ny tontolon'ny famenony. Ny rafitra iorenan'ireo fitambarana ireo, indrindra ny Urolithin A, Urolithin B, ary ny endrik'izy ireo, dia samy hafa be ary mamokatra vokatra mitovy.
Ny vokatra fanoherana ny inflammatoire an'ny Urolithin A sy Urolithin B dia manana mekanisma mitovy amin'ny Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs na NSAID toy ny Ibuprofen sy Aspirin. Ny urolithins dia fantatra fa misy fiatraikany amin'ny famokarana PGE2 sy ny fanehoana ny COX-2. Satria ny NSAIDs dia manakana ny fanehoana ny COX 1 sy ny COX 2, dia azo atao ny mamintina fa ny Urolithins dia misy fiantraikany mahery vaika kokoa amin'ny fanoherana ny inflammatoire.
Ny toetra manohitra ny inflammatoire an'ny Urolithins dia voaporofo fa tsy hiady amin'ny fivontosana ao amin'ny vatana ihany fa afaka mamadika ny fahavoazana natao tamin'ny taova vokatry ny fivontosana lava izay niteraka tsy fahombiazan'ny taova. Tamin'ny fanadihadiana natao vao haingana momba ny maodelin-biby, dia hita fa ny fihinana urolithin dia manana fahaizana manalefaka ny nephrotoxicity ateraky ny zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fahafatesan'ny sela sy ny fivontosana.
Nahitana fa ny vovony urolithin A, nomena am-bava, dia nisy fiatraikany amin'ny lalan'ny fivontosana miaraka amin'ny cascade proapoptotic, noho izany, miaro ny fiasan'ny voa. Ireo fananan'ny Urolithin A miaraka amin'ny urolithins hafa dia manondro ny ho avy izay azo ampiasana fanafody miaraka amin'ireo fampiasana azy ireo ankehitriny ho famenony.
● fananana manohitra ny homamiadana
Ny urolithins dia mino fa manohitra ny karsinogenika noho ny fahaizany misy vokany toy ny fisamborana tsingerin'ny sela, ny fanakanana ny aromatase, ny fampidirana apoptosis, ny famoretana ny fivontosana, ny fampiroboroboana ny autophagy, ary ny fahanterana, ny fifehezana ny oncogenes, ary ny receptor an'ny fitomboana. Ireo vokatra ireo, raha tsy eo, dia mety hiteraka fitomboan'ny sela voan'ny homamiadana. Ny endrika fisorohana ny Urolithins dia voaporofo, indrindra ho an'ny homamiadan'ny prostaty sy ny homamiadan'ny nono, izay mpikaroka maro no mivondrona amin'ny fampiasana Urolithins ho fanafody fisorohana homamiadan'ny prostaty.
Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2018 dia nandinika ny vokatry ny Urolithin tamin'ny làlan'ny mTOR miaraka amin'ny tanjon'ny fitadiavana safidy fitsaboana ho an'ny homamiadan'ny pancreatic. Ny homamiadan'ny pancreatic dia misy ifandraisany amin'ny taha ambony amin'ny isan'ny maty, fa ny fikarohana natao tato ho ato dia mampiseho fa ny urolithin dia mety tsy afaka mampitombo ny tahan'ny fahavelomana fotsiny fa koa manakana ny fanaovana grefy ny sela fivontosana amin'ny faritra hafa amin'ny vatana, ka miteraka metastasis. Ny urolithin A dia nodinihina manokana ary ny valiny dia nampitahaina tamin'ny valiny novokarin'ny fitsaboana mahazatra. Nanatsoaka hevitra fa Urolithin A dia namokatra vokatra tsara kokoa rehefa ampiasaina hitantanana homamiadana pancreatic, amin'ny toe-javatra roa; rehefa ampiasaina irery na miaraka amin'ny drafitra fitsaboana mahazatra.
Miaraka amin'ny fikarohana bebe kokoa, ny tombotsoan'ny Urothilins dia mety misy fitsaboana ny homamiadan'ny pancreatic ihany koa.
● Toetra fananana bakteria
Ny urolithins dia fantatra amin'ny toetran'ny bakteria ary manana izany vokatra izany izy ireo amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fantsom-pifandraisan'ny zavamiaina bitika, tsy mamela azy ireo hivezivezy na hamindra ny sela. Izy ireo koa dia mino fa manana antifungal fananana, na dia mbola tsy mazava aza ny tena rafitra.
Misy pathogens roa izay misy fiantraikany mahery vaika manakana ny Urolithins, ka miaro ny vatan'olombelona. Ireo pathogens ireo dia mikraoba malaria sy Yersinia enterocolitica, izay samy miteraka areti-mifindra mahery amin'ny olombelona. Ny mekanisma anaovan'ny Urolithins fananana bakteria na inona na inona zavamananaina dia mitovy.
● Toetra anti-Estrogenika sy estrogenika
Ny estrogen dia hormonina manan-danja ao amin'ny vatan'ny vehivavy, ary ny fihenan'ny haavony dia mifandray amin'ny soritr'aretina toy ny famaohana, ny tselatra mafana ary ny fihenan'ny taolana. Noho ny maha-zava-dehibe ny hormonina, dia misy dikany fa misy mpisolo toerana karohina mavitrika. Na izany aza, ny hormonina exogenous dia misy fiatraikany sasany izay mahatonga ny fampiasana azy tsy ilaina.
Na izany aza, ny Urolithin A sy ny Urolithin B dia manana rafitra mitovy amin'ny estrogen endogenous ary ny firaiketam-po ho an'ireo mpandray estrogen ao amin'ny vatana. Ny urolithin A dia manana fifandraisana akaiky matanjaka kokoa, indrindra ho an'ireo mpandray alpha raha ampitahaina amin'ny receptor beta. Na dia samy manana ny fitoviana amin'ny estrogen aza ireo fitambarana ireo, ny urolithins dia samy manana ny toetrany estrogenika sy ny anti-estrogène, tsy toy ny estrogen endogenous.
Ny maha-mitovy an'io vokatry ny Urolithins io dia mahatonga azy ireo safidy fitsaboana mety ho an'ny aretina sasany izay mipoitra rehefa omena ny estrogen exogenous hitsaboana ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny estrogen.
● Fanakanana glycation proteinina
Ny glycation proteinina dia dingana iray izay ampidirina proteinina ny molekiola siramamy. Ity dingana ity dia hita mandritra ny fahanterana na anisan'ny aretina sasany. Ny urolithins dia manakana ny fanampiana siramamy, noho izany dia miteraka vokatra fanoherana ny glycation. Ankoatr'izay, manakana ny fiforonan'ny endri-glycation mandroso izy ireo, ny fanangonam-bokatra izay dingana iray lehibe amin'ny fivoaran'ny diabeta.
Soa azo avy amin'ny Urolithins
Ny urolithins dia manana rafitra fiasa samy hafa mba hamokarana tombontsoa miaro isan-karazany amin'ny vatan'olombelona. Ny vovony Urolithin A sy ny vovo Urolithin B dia manampy amin'ny famokarana ireo famenony izay malaza noho ny tombotsoan'ny akora fototra. Ny tombo-tsoa azo avy amin'ireto fitambarana simika ireto dia tohanan'ny porofo ara-tsiansa, ary na dia ny fikarohana bebe kokoa aza dia natao hanohanana ny fanampiana Urolithins amin'ny torolàlana momba ny fitsaboana aretina maro.
Ny tombotsoan'ireo fitambarana ireo, miorina amin'ny mekanisma voalaza etsy ambony, dia misy:
Ny urolithins dia nalaina avy tamin'ny sakafo marobe ellagitannins maro izay fantatra fa manankarena antioksida. Ny loharanon-tsakafo mahazatra indrindra ho an'ny ellagitannins sy asidra ellagic dia ny ampongabendanitra, ary loharanon-tsiranoka mahery vaika koa izy ireo. Na izany aza, zava-dehibe ny manavaka raha toa ka mitovy ny toetra mampiavaka ny antioxidant amin'ny loharanom-pahalalana sy ny urolithins na raha misy manana tanjaka ambony noho ilay iray hafa.
Ny fandinihana voalohany momba ny Urolithin A sy ny Urolithin B dia nampiseho fa ny vokadratika misy an'ireny dia 42 heny noho ny an'ny voankazo, noho izany dia midika fa ireo singa simika ireo dia tsy natao ho an'ny akora tsara ho famenony.
Na izany aza, ny fandalinana natao tato ho ato miaraka amina fomba fandalinana hafa dia mampiseho fa ny Urolithin A sy B dia samy mandaitra ary manana fananana mahery vaika mahery vaika izay hiady amin'ny vokatry ny adin-tsaina oxidative. Raha ny fomba fandalinana mitovy no nampiasaina handinihana ny urolithins rehetra hahitana hoe iza no mahery indrindra, niavaka i Urolithin A. Ny valiny dia naverina namboarina tamina fandalinana mitovy amin'izany ary Urolithin A no nitarika ny hery.
Raha ny marina, ny iray amin'ireo fanadihadiana dia nifantoka tamin'ny fanombanana ny fananana antioxidant an'io fitambarana simika io tamin'ny fitsapana ny fahafahany miady amin'ny adin-tsaina oxidative. Ho an'ny tanjon'ity fandinihana ity, ny mpikaroka dia nampisy ny adin-tsaina tao amin'ny sela neurônaly ary rehefa tratry ny Urolithins, indrindra ny Urolithin B, dia tsikaritr'izy ireo ny fihenan'ny fihenjanana voan'ny fihenan'ny sela neuronal.
Ny fananana miady amin'ny inflammatoire an'ny Urolithins dia miteraka tombony maro, izay voaporofo ara-tsiantifika avokoa.
Ny fanafody an-trano ho an'ny fitsaboana tazomoka izay be mpampiasa amin'ny faritra ambanivohitra sasany dia misy ny fampiasana ny ampongabendanitra. Ny mpikaroka dia nanandrana nahatakatra ny vokatra tsara an'io fanafody io amin'ny fitsaboana tazomoka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny valiny amin'ny vokatry ny Urolithins metabolized ao amin'ny tsinay avy amin'ny ampongabendanitra.
Nisy fanadihadiana natao mba handinihana ny vokatry ny Urolithins amin'ny fitsaboana tazomoka amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo sela monositika voan'ny Urolithins. Ity fandinihana ity dia nahita fa ny fitambaran'ny akora simika dia manakana ny famotsorana ny MMP-9, izay metalloproteinase manan-danja amin'ny fampandrosoana sy ny pathogenesis amin'ny tazomoka. Ny fanakanana ny fitambarana dia manakana ny tazomoka tsy ho lasa pathogenika ao amin'ny vatana, ka noho izany dia inoana fa misy vokany antimalarial.
Ny valin'ny fandinihana dia nampiseho ihany koa fa ny Urolithins dia nanakana ny fanehoana mRNA ny otrikaretina malaria, ary niafara tamin'ny fanakanana bebe kokoa ny fahafahan'ny zavamiaina bitika hiteraka aretina. Ny valin'ity fandinihana ity dia manaporofo fa ny vokatra mahasoa amin'ny fitsaboana an-trano ao anatin'izany ny ampongabendanitra dia vokatry ny vokatry ny urolithin.
2. Fiatra amin'ny sela endothelial
Ny atherosclerosis dia toe-javatra mahazatra izay mitarika amin'ny ompa am-po sy ny tsy fahatokisan'ny myocardial. Ny antony roa mahazatra ao ambadiky ny fivoaran'ny atherosclerosis dia ny tsy fetezan'ny endothelial sy ny fivontosana. Ny fandalinana vao haingana dia nanandrana nanaporofo fa ny toetra manohitra ny inflammatoire Urolithin dia mety afaka misoroka ny tsy fitrohana endothelial, ary noho izany, mitantana ny fananganana atherosclerosis sy ny fampandrosoana.
Ny urolithin A dia hitan'ny mpikaroka manana fihetsika avo indrindra fanoherana ny inflammatoire eo amin'ireo urolithins rehetra. Ny fandalinana vao haingana dia nifantoka tamin'ny sela endothelialan'olombelona izay natsofoka tamin'ny LDL voan'ny oksidia, fepetra takiana amin'ny fananganana atherosclerosis, ary ny fifantohana samihafa amin'ny Urolithin A. Hitan'ny mpikaroka fa ny Urolithin A dia nanakana ny synthase azota azota ary nihena ny fitenin'ny I-CAM, izay nanjary mampihena ny fivontosana ary mihena ny fahafahan'ny sela, indrindra ny monocytes hifikitra amin'ny sela endothelial, avy. Ny fihenan'ny monosittic dia mampihena ny tsy fetezan'ny endothelial.
Ankoatr'izay, ny Urolithin A dia hita hampihena ny fitenin'ny fivontosana nekrosis factor α, interleukin 6, ary ny endothelin 1; cytokines mpomba ny inflammatoire rehetra.
3. Fiantraikany amin'ny Fibroblasts ao amin'ny Colon
Ny kolonely dia tratran'ny aretina azo tsapain-tanana sy mpiorina amin'ny sakafo izay mahatonga azy io mora tohin'ny fivontosana, izay amin'ny fotoana maharitra dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana maro. Satria ny Urolithin A sy Urolithin B dia vokarin'ny flora amin'ny tsinay, zava-dehibe ny fahalalana ny vokany eo amin'ny toerana voalohany amin'ny vatana noforonina.
Mba handinihana ny vokatry ny Urolithins amin'ny sela colon sy fibroblasts, ny mpikaroka dia nanao fanandramana izay nahitana fibroblast tamin'ny cytokines pro-inflammation ary avy eo tamin'ny Urolithins. Araka ny voalaza tetsy ambony, dia hita fa ny Urolithins dia manakana ny firaiketam-pozana monocyte sy ny fifindra-monin'ny fibroblast hanakanana ny fivontosana ao amin'ny zanatany.
Ankoatr'izay, hita fa ny Urolithins dia nanakana ny fampandehanana ny singa NF-κB, izay manan-danja amin'ny fandrindrana ny fivontosana. Raha ny marina dia mino ny mpikaroka fa io no antony lehibe aorinan'ny urolithins anti-inflammatoire.
Ny urolithins dia mifandraika amin'ny toetra fanoherana ny homamiadana, ary ny mekanin'ireto fananana ireto dia voalaza etsy ambony. Na izany aza, ny tombotsoan'ireo fananana ireo dia voalaza etsy ambany:
1. Fiarovana amin'ny homamiadan'ny Prostate
Ny fitadiavana urolithins ao amin'ny vatana dia matetika atao na amin'ny fampiasana ra na urina; na izany aza, dia azo tsapain-tanana izy ireo na amin'ny zanaky ny lahy na ny vavy ary ny fihary prostaty an'ny lehilahy.
Vokatr'ity fikarohana ity dia nanandrana nanadihady ny mpikaroka raha toa ka hita ao amin'ny fihary prostaty ny tombon-tsoa azo avy amin'ny fitambaran'ny otrikaretina toy ny ao anaty tsinay. Noho izany, natao ny fandinihana iray, ny valiny dia nanaporofo fa ny Urolithins dia misy fiantraikany miaro amin'ny fihary prostaty.
Hita fa ny Urolithin A sy Urolithin B, miaraka amin'ny Urolithin C sy Urolithin D dia nanakana ny anzima CYP1B1 ao amin'ny fihary prostaty. Ity anzima ity dia lasibatry ny fitsaboana simika ary nosakanan'ny Urolithin A mafy izany, raha oharina amin'ny urolithins hafa. Izy ireo koa dia nanakana ny CYP1A1, na izany aza, ny fitifirana urolithins ambony kokoa dia ilaina mba hamokarana izany vokatra izany.
Ny fandinihana iray hafa dia natao mba handinihana ireo vokany miaro amin'ny prostate an'ny Urolithins. Hita fa ny Urolithin A dia nisy fiantraikany fanoherana ny homamiadana amin'ny homamiadan'ny prostaty tamin'ny alàlan'ny fomba roa, miankina amin'ny p53 ary p53 tsy miankina.
Fiatoana 2.Topoisomerase 2 sy CK 2
Ny urolithins dia manana fananana miady amin'ny homamiadana amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo lalan-molekiola maromaro izay mitarika mivantana na tsia amin'ny fihenan'ny fitomboan'ny homamiadana. Ny anzima CK2 dia anzima manan-danja izay mandray anjara amin'ny lalan'ny molekiola toy izany, miaraka amin'ny asany lehibe indrindra ny fampiroboroboana ny fivontosana sy ny homamiadana.
Ny urolithins dia manakana ny làlan-kizorana samihafa hahatratrarana ny anzima an-tsokosoko, ny CK2 dia hanakana ny vokany, toy ny fananana mampiroborobo ny homamiadana. Ny urolithin A dia naseho ho mpanakana CK2 mahery, amin'ny silico.
Toy izany koa, ny fihenan'ny Topoisomerase 2 dia inoana fa misy vokany fanoherana ny homamiadana. Raha ny marina, ity mekanisma ity dia ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana simika sasany toa ny Doxorubicin. Tamin'ny fanadihadiana natao vao haingana, dia hita fa ny Urolithin A dia matanjaka kokoa noho ny Doxorubicin amin'ny fanakanana ny Topoisomerase 2, noho izany, mitaky ny hanampiana ireo torolàlana ankehitriny momba ny fitsaboana homamiadana sasany.
Ny toetra mampiavaka ny bakteria Urolithins dia miankina amin'ny Inhibition an'ny Korama izay manala ny fahafahan'ny microorganism mifampiresaka, mihetsika ary mamorona singa virulence. Izy io dia rafitra iray manan-danja amin'ny fahaveloman'ny bakteria, ary ny fanakanan'ny Urolithins dia mahafaty ny zavamiaina bitika.
Ny fananana bakteria lehibe an'ny Urolithin dia ny fahaizany miaro ny tsinainy amin'ny firoboroboan'ny Yersinia enterocolitica. Raha ny marina, ny Urolithins dia mifandraika amin'ny fanodinkodinana ny tsinay flora, ilay flora iray ihany izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana azy voalohany. Zava-dehibe indrindra izany satria ny zavamiaina manokana ao amin'ny flora ihany no afaka mampitombo ny famokarana Urolithins.
Ny urolithins dia mamatotra ireo mpandray Estrogen ary mamokatra toetra roa, estrogenic sy anti-estrogenic. Izany dia mahatonga azy ho mpirotsaka hofidiana ho an'ny Modulateur Estrogen Receptor Modulator na SERMs, ny mekanisma lehibe indrindra dia ny fananana fiatraikany tsara amin'ny faritra iray amin'ny vatana sy ny vokatra manakana ny faritra hafa amin'ny vatana.
Tao amin'ny iray amin'ireo fanadihadiana natao momba ny vokatry ny urolithins amin'ny receptor estrogen, dia hita fa izy ireo, indrindra urolithin A, dia manakana ny fanehoana ny sela sela homamiadan'ny endometrial ER-positive, ka miteraka fihenan'ny homamiadana endometrium. Ny hypertrophy endometrial dia voka-dratsin'ny estrogen exogenous amin'ny post neoplasia toy ny vehivavy mandray fitsaboana hormonina, ary ny fampiasana urolithins dia mino fa misy fiatraikany amin'ny endometrium. Na izany aza, mila fikarohana fanampiny alohan'ny ahafahan'ny Urolithins lasa fanafody SERM manaraka.
Ny fisian'ny vokatra farany glycation endri-javatra dia mampiavaka ny hyperglycemia izay mitarika ny olona ho voan'ny aretim-po vokatry ny diabeta na koa ny aretin'i Alzheimer. Ny urolithin A sy ny Urolithin B dia naseho fa misy fiantraikany manohitra ny glycation izay misoroka ny fanevatevana am-po ary mampihena ny risika ny neurodegeneration.
Noho izany, ny fanakanana ny glycation proteinina avy amin'ny Urolithins dia inoana fa samy manana ny vokatry ny cardioprotective sy ny neuroprotective.
Ny tombotsoan'ny Urolithin A dia voalaza etsy ambany:
● Ampitomboy ny androm-piainanao
Ny fahanterana, ny adin-tsaina ary ny aretina sasany dia mety hanimba ny mitochondria, izay tena ilaina amin'ny famokarana angovo ara-dalàna sy ny fampiasana ny vatana. Ankoatr'izay, ny mitochondria dia matetika antsoina hoe 'herin'ny sela', izay manondro ny maha-zava-dehibe ny fiasan'ny sela ara-dalàna. Noho izany, ny fahasimbana amin'ity herinaratra ity dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny sela ary hampihena ny androm-piainany.
Ny urolithins dia miteraka vokatra manokana fantatra amin'ny hoe mitophagy izay mamela ny vatana hanala mitochondria simba, na inona na inona antony mahatonga ny fahasimbana, ary hampitombo ny androm-piainana. Miorina amin'ny habetsaky ny fahasimbana, ny mitochondria dia azo averina ampiasaina amin'ny famokarana otrikaina sy angovo.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny urolithins dia manana toetra manohitra ny inflammatoire ary ireo fananana ireo no mampiroborobo ny fiforonan'ny sela neurônaly ao amin'ny ati-doha, izay misy fiatraikany tsara amin'ny fihazonana kognita sy fitadidiana. Ankoatr'izay, Urolithin A dia miaro amin'ny neurodegeneration hita amin'ny aretin'i Alzheimer, noho izany, ny vokatry ny neuroprotective.
● Fisorohana ny homamiadan'ny Prostate
Urolithin A dia manana fananana fanoherana ny homamiadana saingy hita indrindra izy ireo amin'ny tranga homamiadan'ny prostaty, miaraka amin'ny fanadihadiana maro izay mampiroborobo ny fampiasana ampongabendanitra sy loharanom-piainana Urolithins hafa ho an'ny homamiadan'ny Prostate.
● Mitondrà fiterahana
Ny urolithin A dia misy fiatraikany fanoherana ny hatavezina satria tsy vitan'ny hoe manakana ny fiangonan'ny sela matavy ao amin'ny vatana izany fa manakana ireo marika marika tompon'andraikitra amin'ny adipogenesis. Tao amin'ny fanadihadiana natao tamin'ny maodelin-biby, dia hita fa ny Urolithin A dia misy fiatraikany avo amin'ny hormonina t3 tiroida, izay mitombo ny fandaniana angovo amin'ireo totozy. Izany dia mitaona ny thermogenesis ary mahatonga ny tavy volontany hitsonika, raha ny tavy fotsy kosa kosa dia entina mankalefaka.
Tao anatin'io fanadihadiana io ihany, dia hita fa ny URolithin A dia misy fiantraikany misoroka amin'ny tavy na dia amin'ny totozy aza izay nomena sakafo matavy be. Mampiseho fampanantenana lehibe izany raha ny momba ny hatavezina ary ny mpikaroka dia niantso ny fampiharana ny olombelona ireo fikarohana ireo mba hahafahany mampiasa io fitambarana io hiadiana amin'ny areti-mifindra.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny Urolithin B dia eto ambany:
● Fisorohana ny fahaverezan'ny hozatra
Urolithin B dia mizara ny sasany amin'ireo tombony azo avy amin'ny Urolithin A nefa manana tombony manokana iray, tsy manam-paharoa ho azy irery. Ny urolithin B dia fantatra amin'ny fisorohana ny fahaverezan'ny hozatra amin'ny fanjakana ara-batana sy ara-pahasalamana. Ankoatr'izay, mampiroborobo ny fitomboan'ny hozatra taolana amin'ny fampitomboana ny synthesis ao amin'ny hozatra.
Izy io koa dia misy fiantraikany fisorohana amin'ny atrophy hozatra araka ny hita tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny totozy izay notapahina ny hozatry ny sciatic. Mety hitarika atrophy hozatra io fa ny totozy dia napetraka tamina paompy osmotic mini izay manome azy ireo tsy tapaka Urolithin B. Hita fa nofehezina ireo lalan-jaza-proteasome ubiquitin-proteasome, izay nanjary tsy fisian'ny atrophy hozatra na dia teo aza ny fizarazaran-kozatra sciatic .
Ny urolithins dia avy amin'ny fitambarana voajanahary ary ny famenony dia heverina ho mahazaka tsara tsy misy mpanao gazety misy poizina. Na izany aza, ilaina ny mitadidy fa ireo fitambarana ireo dia mbola eo ambanin'ny fikarohana ary manana fatra fatra tokony harahina fatratra.
Taorian'ny fikarohana lalina momba ny tombotsoan'ny Urolithin A, nisy fikarohana fikarohana maromaro natao mba hanombanana ny fatra marina an'io fitambarana simika io. Ny fandalinana ny famerenana, ny fandevonan-kanina, ny metabolism ary ny fanafoanana dia natao mba hamakafakana ireo fiasa ao amin'ilay fitambarana.
Ny fandinihana dia nizara ho roa, miankina amin'ny isan'ny andro, ary hita fa ny fandalinana 28 andro miaraka amin'ny 0, 0.175, 1.75, ary 5.0% an'ny Urolithin A mifangaro amin'ny sakafo sy ny fianarana 90 andro miaraka amin'ny 0, 1.25, ary 2.5% Urolithin A mifangaro amin'ny sakafo dia tsy mampiseho fiovana amin'ny fari-pitsaboana, ny simia amin'ny ra, na ny hematolojia, ary tsy midika hoe misy poizina misy poizina manokana. Ny fandalinana roa dia ny fatra avo indrindra nosedraina tamin'ny 5.0% UA ny lanjan'ny sakafo izay nitarika ireto dosie manaraka ireto; 5 mg / kg BW / isan'andro amin'ny lahy ary 3451 mg / kg BW / andro amin'ny vehivavy amin'ny fanadihadiana am-bava 3826 andro.
Mitovy amin'ny Urolithin A, Urolithin B dia nodinihina betsaka mba hanombanana ny doka tonga lafatra. Na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa ny fandinihana dia nifantoka tamin'ny doka azo antoka mba hahazoana fitomboan'ny hozatra tsara indrindra. Ity fatra ity dia hita fa 15uM, ho an'ny lahy sy ny vavy, tsy jerena ny lanjany.
Ity fitambarana ity dia ampiasaina ihany koa, indrindra satria mpanelanelana mandritra ny famokarana Urolithin A. Na izany aza, tsy ampy ny fikarohana natao ho an'ny doka mety hofaritana ho an'ity Urolithin manokana ity.
Ny urolithins dia tsy hita voajanahary amin'ny loharano fisakafoanana, na izany aza, dia hita ho ellagitannins izy ireo. Ireo taninina ireo dia mizara ho asidra ellagic, izay mihombo hatrany amin'ny Urolithin A 8-Methyl ether, avy eo mankany Urolithin A, ary farany, Urolithin B. Ireo sakafo manankarena ao amin'ny Urolithins dia:
Voankazo (lanja / 100g vaovao)
Voanjo (mg / g)
Fisotroana (mg / L)
Divay mena antitra oaka
Voa (mg / g)
Araka ny hita eo amin'ny latabatra, ny Cloudberry dia voankazo misy Ellagitannins avo indrindra sy asidra Ellagic, miaraka amin'ny ampongabendanitra ho iray segondra akaiky. Ny ranom-ampongabendanitra anefa dia loharanom-pahefana matanjaka kokoa, efa ho avo telo heny mahery noho ny Cloudberry.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny atin'ny asidra ellagic ao amin'ny loharanon-tsakafo dia tsy mitovy amin'ny urolithin mitovy amin'ny vatana. Ny bioavailability an'ny URolithins dia miankina betsaka amin'ny microbiota tsinay isaky ny olona.
Nahoana ianao no tokony hividy amin'ny orinasa mpanamboatra?
Ny vovoka urolithin A sy ny vovo-tany urolithin dia misy betsaka, amin'ny orinasan-tsika mpanamboatra izay mampifangaro ny famokarana, ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny fivarotana famenon-tsakafo toy izany. Ny vokatray dia amboarina amin'ny alàlan'ny famaritana tanteraka mba hanarahana ny torolàlana momba ny fiarovana, izay miantoka ny kalitao avo lenta sy ny vokatra farany. Ny vokatra rehetra dia karohina alohan'ny famokarana ary voasedra tsara mandritra sy aorian'ny famokarana mba hahatratrarana ny fenitry ny kalitao.
Aorian'ny famokarana, ny vokatra dia notsapaina tao amin'ny laboratoara indray mandeha indray hijerena ny kalitao, ny tanjaka ary ny fiarovana ireo vovoka Urolithin sy ireo vokatra hafa. Vantany vao vita ny fizarana, ny vokatra dia fenoina ary voatahiry amin'ny toerana sahaza azy, amin'ny mari-pana mety ary manaraka ny torolàlana rehetra hahazoana antoka fa mahatratra anao ny vokatra avo lenta. Ny vovoka urolithin dia tsy tratry ny hazavan'ny masoandro mandritra ny fitaterana, ny fonosana na ny fitehirizana satria mety hanimba ny vokatra farany.
Ny fividianana vovoka Urolithin A sy vovo Urolithin B avy amin'ny ozinina mpanamboatra anay dia miantoka vokatra avo lenta amin'ny vidiny mirary tokoa.
Inona ny Urolithin A?
Ny Urolithin A (UA) dia novokarin'ny bakteria tsinain'ny olombelona voan'ny kapoaly polyphenolic sakafo izay misy asidra ellagic (EA) sy ellagitannins (ET), toy ny punicalagin. Ireo precursor polyphenolic ireo dia hita betsaka amin'ny voankazo (ampongabendanitra sy voaroy sasany) ary voanjo (voanjo sy pecan).
Ahoana ny fiasan'ny Urolithin?
Urolithin A (UA) dia Tambatra azo avy amin'ny tsinay microbiome misy tombony ara-pahasalamana amin'ny fahanterana sy ny aretina. Ny vokatra ara-tsakafo maromaro dia misy polyphenols ellagitannins voajanahary (ETs) sy asidra ellagic (EA). ... Rehefa dinihina tokoa, ny UA dia misy fiantraikany tsara amin'ny fahasalaman'ny mitochondrial sy ny sela amin'ny toe-javatra sy aretina mifandraika amin'ny taona.
Inona avy ireo voankazo misy Urolithin A?
Ny loharanon'ny ellagitannins dia: ampongabendanitra, voanjo, voaroy sasany (voaroy, frezy, blackberry, cloudberry), dite, voaloboka muscadine, voankazo tropikaly marobe, ary divay tranainy oak (latabatra etsy ambany).
Inona no atao hoe Urolithin?
Ny microbiota tsinay dia mamadika asidra ellagic ka miteraka urolithins bioactive A, B, C, ary D. Urolithin A (UA) no metabolite tsinay mavitrika sy mahomby indrindra ary miasa toy ny anti-inflammatory sy anti-oxidant agent.
Inona no tsara ho an'ny Urolithin?
Ny Urolithin A dia mandrisika ny mitophagy ary manalava ny androm-piainan'ny C. elegans ary mampitombo ny fiasan'ny hozatra amin'ny biby mpikiky.
Inona no sakafo misy Urolithin A?
Loharanon-tsakafo avy amin'ny urolithin A
Hatreto, ny fikarohana dia nahita fa ny ampongabendanitra, frezy, voaroy, camu-camu, voanjo, voatavo, pistachios, pecans, dite natao labiera, ary divay sy fanahy efa antitra amin'ny barika oaka dia misy asidra ellagic sy/na ellagitannins.
Inona no tombony azo amin'ny Urolithin A?
Urolithin A (UA) dia metabolite ara-tsakafo voajanahary, mikraoba azo avy amin'ny microflora aseho amin'ny famporisihana ny mitophagy ary manatsara ny fahasalaman'ny hozatra amin'ny biby antitra sy amin'ny modely efa antitra.
Ahoana no ahazoantsika Urolithin A amin'ny sakafontsika?
Inona no atao hoe Mitopure?
Mitopure dia karazana Urolithin A manana fananana sy madio indrindra. Manampy ny vatantsika hanohitra ny fihenan'ny sela mifandray amin'ny fahanterana izy io amin'ny alàlan'ny famelomana indray ireo mpamokatra herinaratra ao anatin'ny sela; izany hoe ny mitochondria antsika. ... Ny Urolithin A dia manatsara ny fiasan'ny mitochondrial sy ny hozatra, manome hery bebe kokoa ny sela.
Azo antoka ve ny Mitopure ho an'ny fihinanan'olombelona?
Ankoatr'izay, amin'ny fandalinana klinika olombelona dia tapa-kevitra ny ho azo antoka i Mitopure. (Singh et al, 2017). Ny Mitopure koa dia nojeren'ny US Food and Drug Administration (FDA) taorian'ny fametrahana GRAS (ekena amin'ny ankapobeny ho azo antoka).
Rahoviana aho no tokony handray Mitopure?
Manoro hevitra ny haka softgels Mitopure roa isan'andro izahay mba hahazoana vokatra tsara. Na dia azonao atao aza ny maka Mitopure amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro, dia manoro hevitra izahay ny haka azy miaraka amin'ny sakafo maraina, satria izany no protocole nampiasainay tamin'ny fitsapana klinika.
Inona no atao hoe Urolithin supplement?
Urolithin A (UA) dia Tambatra azo avy amin'ny tsinay microbiome misy tombony ara-pahasalamana amin'ny fahanterana sy ny aretina. Ny vokatra ara-tsakafo maromaro dia misy polyphenols ellagitannins voajanahary (ETs) sy asidra ellagic (EA). Rehefa mihinana sakafo toy izany, ny ET sy ny EA dia mivadika ho UA amin'ny alàlan'ny microflora ao amin'ny tsinay lehibe.
Ny tombony fanampiny amin'ny Urolithin A
Ny Urolithin A dia manatsara ny fiasan'ny mitochondrial sy ny hozatra, manome hery bebe kokoa ny sela. Izy io dia fitambarana manohitra ny fahanterana voajanahary izay afaka mandray soa ho an'izay mitady hihazona ny fahasalaman'ny hozatra.
Inona ny Urolithin B?
Urolithin B dia urolithin, karazana sôkôla génôsika novokarina tao an-kibon'olombelona taorian'ny fampidiran-tsakafo ho an'ny ellagitannins misy sakafo toy ny tsaramaso, frezy, raspberry mena, ravina na divay mena efa misy menaka. Urolithin B dia hita ao anaty urine amin'ny endrika urolithin B glucuronide.
Urobolin dia fanampin-tsakafo avy amin'ny punica granatum (Pomegranate) izay manara-penitra amin'ny Urolithin B. Urobolin ho fanampin-tsakafo dia afaka manalefaka ny fahasimban'ny hozatra niainana nandritra ny fanatanjahan-tena mahery vaika ary miaro ny hozatra amin'ny adin-tsaina ateraky ny sakafo matavy be.
Totiger TM, Srinivasan S, Jala VR, et al. Urolithin A, singa voajanahary voajanahary mankany amin'ny làlan'ny PI3K / AKT / mTOR kendrena amin'ny homamiadana pancreatic. Mol cancer Ther. 2019; 18 (2): 301-311. doi: 10.1158 / 1535-7163.MCT-18-0464.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. Ny Urolithin A dia manalefaka ny neprotoxisika ateraky ny Cisplatin amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fivontosana amin'ny renal sy ny apoptose amin'ny maodely Rat Rat. J Pharmacol Exp Ther. 2017; 363 (1): 58-65. doi: 10.1124 / jpet.117.242420.
Juan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, Francisco Tomás-Barberán, "Manan-danja ara-biolojika ny urolithins, ny metabita azo avy amin'ny asidra asidra Gut Microbial Ellagic: ny porofo hatreto", ny fitsaboana mifototra amin'ny porofo ary ny fitsaboana hafa, vol. 2013, Article ID 270418, pejy 15, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/270418.
Lee G, Park JS, Lee EJ, Ahn JH, Kim HS. Mekanisme anti-inflammatoire sy antioxidant an'ny urolithin B amin'ny microglia mihetsika. Phytomedicine. 2019; 55: 50-57. doi: 10.1016 / j.phymed.2018.06.032.
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A dia manamaivana ny fihenan'ny endothelialan'ny otro-LDL amin'ny alàlan'ny fanodinana ny lalan'ny microRNA-27 sy ERK / PPAR-γ. Mol Nutr Sakafo Res. 2016; 60 (9): 1933-1943. doi: 10.1002 / mnfr.201500827.